Amehlo omhlaba okhethweni lwaseLibya ngoZibandlela - Bayede News
Inhloko yoMkhandlu kaMengameli waseLibya ithe ngesonto eledlule izobamba ingqungquthela yamazwe omhlaba kuyo le nyanga, uMfumfu, ukuthola ukusekelwa kokuzinza kwezwe, ixwayise ngokuthi ibhekene “nezinselelo ezinzima” ezingabukela phansi ukhetho lwangoZibandlela oluhleliwe.
Ekhuluma nomhlangano waminyaka yonke we-United Nations (UN) wabaholi bomhlaba eNew York, uMohammed al-Menfi uthe ingqungquthela izobe ihlose ukuqinisekisa ukwesekwa “okuhlangene, okungaguquguquki” kwamazwe omhlaba kanye nokubuyisa umuzwa wobuholi baseLibya nobunikazi ngekusasa lezwe. Sibhekene nezinselelo ezinkulu nezentuthuko ezisheshayo, ezisiphoqelela – ngaphandle kwesibopho – ukuthi sicabange ngezindlela ezingokoqobo nezisebenzayo zokugwema isithiyo enqubeni yezepolitiki, engabuye iphazamise ukhetho oluzayo futhi sigcina sesiphoqeka ukubuyela emuva kulokhu esizama ukudlula kukho,” kusho yena.
Ukhetho lukazwelonke, oluhlelelwe uZibandlela zingama-24, lwagqugquzelwa njengendlela yokuqeda le nkinga yaseLibya eyathatha iminyaka eyishumi, kodwa yafakwa ezingxabanweni ezibuhlungu mayelana nokuba semthethweni okungadalula inqubo yokuthula yezinyanga.
“Leli lizwe lisesimweni esibucayi ngendlela emangalisayo” kusho uMenfi.
UNgqongqoshe Wezangaphandle waseFrance, uJean-Yves Le Drian utshele abezindaba eNew York ngoMsombuluko ukuthi iFrance, iGermany kanye ne-Italy bazobamba iqhaza engqungqutheleni yamazwe omhlaba ngeLibya ngoLwezi ziyi-12 ukuqinisekisa ukuthi ikhalenda lokhetho lizohlala likhona.
Ngowezi-2014, amaqembu asempumalanga nasentshonalanga ahlukanisa iLibya kwaba ebuswa ngamaqembu amabili ahlukene empini yombango, nohulumeni owaziwa umhlaba wonke eTripoli kanye nabaphathi abayizimbangi abasekelwa yiNdlu yabaMamele empumalanga. Ukhetho lwangoZibandlela zingama-24 lwalugunyazwe yiLibya Political Dialogue Forum, okuyinhlangano eyakhethwa yi-UN eyabeka umkhombandlela wokuthula eLibya, ongumkhiqizi omkhulu kawoyela, ngokufaka noma ngokusungula uhulumeni wobumbano nangokuvota ezweni lonke.
Kuze kube kubanjwa ukhetho, lo mhlangano wakhetha uMkhandlu kaMengameli wabantu abathathu oholwa nguMenfi wabeka u-Abdulhamid Dbeibeh njengoNdunankulu kaHulumeni wesikhashana.